Dominican Republic iyo Cuba si ay u horumariyaan mashruuca dalxiiska meelo badan oo wadajir ah |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Dominican Republic iyo Cuba si ay u horumariyaan mashruuca dalxiiska meelo badan oo wadajir ah
Dominican Republic iyo Cuba si ay u horumariyaan mashruuca dalxiiska meelo badan oo wadajir ah
Mas’uulkan ayaa arrintan ku dhawaaqay intii lagu guda jiray shirkii ugu horreeyay ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Dominican Republic, kaasoo ka socda Punta Cana, oo ah xarun dalxiis oo ku taal bariga Dominican ee La Altagracia.
Wasiir Javier ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Cuba ay daneynayaan in ay si wadajir ah ula shaqeeyaan dalkiisa meelo badan oo loogu talagalay suuqa Shiinaha waxayna sidoo kale doonayaan dhammaan dalxiisayaasha Shiinaha ee booqda Cuba inay sidoo kale booqdaan Jamhuuriyadda Dominican.
Diyaaradda Air China ayaa ku dhawaaqday furitaanka wadada isku xirta Beijing iyo Havana dabayaaqadii Diseembar iyadoo leh seddex duulimaad todobaadle ah tanina waxay war wanaagsan u tahay mashruuca wadajirka ah ee meelo badan, ayuu yiri sarkaalku.
Dalxiisayaasha Shiinaha ayaa aad u xiiseynaya inay booqdaan meelo cusub iyadoo la qiyaasayo in in ka badan 100 milyan oo ka mid ah ay ku socdaalayaan meelo kala duwan oo adduunka ah, sida ay sheegtay Wasaaradda Dhaqaalaha, Qorshaynta iyo Horumarinta ee Dominican, oo ka mid ah qabanqaabiyeyaasha madasha.
Viejas Casino & Resort waxay furay munaaradda labaad ee hudheelka raaxada
Safaaradda Suudaan oo soo saartay bayaan ku saabsan cusboonaysiinta xaaladda degdegga ah ee qaranka Mareykanka